Madasha Sawirrada: Iyo Toddobaadkan.
You are here: Home Home Madasha Sawirrada: Iyo Toddobaadkan.
Toddobaadkan waxa madasha sawirrada inoogu marti ah, sawir taariikhiya oo aanu ka qaadnay qaar ka mid ahaa Mujaahidiintii SNM.
Goobtu waa balli-gubadle oo markaa ahayd xaruntii SNM. Waa makhaayaddii Raxma ee shaaha ee ku dhex taallay magaalada. Waxa goobtaa fadhiyay oo ka shaahaynayay shan Mujaahid oo ay ka mid ahaayeen: Maxamed Kaahin Axmed, Laba Mujaahid oo kolleyba ka soke ee midigta soo xigaa ka mid ahaa saraakiishii ciidammada. Aadan Saleebaan Cabdi iyo Cabdi Giirre. Waa sannadkii 1989kii.